Fandaminana :: Velona ny fanoheran’ireo mpivarotra ny fampanarahan-dalàna eto Iarivo • AoRaha
Niverina nivarotra teny amin’ny sisin-dalana ireo mpivarotra amoron-dalana, teny Anosibe, tamin’ny sabotsy sy ny alahady, taorian’ny korontana niseho ny zoma alina. Nanohitra ny fandaminana ihany koa ireo mpivarotra teny Anosy.
Nahitana mpitandro ny filaminana ihany teny amin’ ny manodidina an’Anosy sy Andrefan’Ambohijanahary, omaly. “Mangorona entana avy hatrany ireo mpivarotra rehefa mandalo ny mpitandro filaminana, ka tsy mahafoana ny fisian’izy ireo eny an-dalana mihitsy”, hoy ny mpamily fiarakaretsaka iray, teny an-toerana.
Tsiahivina ny fanamafi­sana nataon’ny mpitandro filaminana amin’ny fitohizan’ ny asan’izy ireo, amin’ity herinandro ity. “Tsy ny fana­làna na fandroahana mpiva­rotra akory no asa nampian­drai­ketina anay fa fanalalahana ny fifamoivoizana. Tsapa anefa fa anisan’ny mampitohana ny fifamoivoizana ny fisian’ireo mpivarotra amoron-dalana ka tsy maintsy bea­zina izy ireo fa ny arabe ho an’ny fiara, ny sisin-dalana ho an’ny mpandeha an-tongotra. Tokony any an-tsena kosa ireo mpivarotra no manao ny asany”, hoy i Ainanirina Albert Estel, talen’ny kabinetran’ny minisiteran’ny Fila­minam-boahoaka, omaly.
Fanokafana ny taom-pambolen-kazo :: Olona roa arivo sy iray alina mahery niara-dia tamin’ny Filohan’ny Repoblika
Famatsiana herinaratra – Andranobevava :: Lasibatry ny fitarazohan’ ny asan’ny Jirama ireo mpanjifa